३३ किलो सुन र सनम हत्या प्रकरणमा नयाँ ‘मोड’, बयान दिन आएका डिएसपी गृहबाटै ‘फरार’ – PathivaraOnline
Home > समाचार > ३३ किलो सुन र सनम हत्या प्रकरणमा नयाँ ‘मोड’, बयान दिन आएका डिएसपी गृहबाटै ‘फरार’
admin April 25, 2018 समाचार 0
काठमाडौं, १२ वैशाख । ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा गृह मन्त्रालयमा बयान दिइरहेका डिएसपी सञ्जय राउत एक्कासि बेपत्ता बनेपछि छानविन समितिका सदस्यहरूमाथि शंका उब्जिएको छ ।
बयान नसकिँदै मंगलबार अपरान्ह राउत फरार भएको घटना रहस्यमय बनेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रमुख समेत रहेका उनी बयान नसकिँदै अचानक फरार भएपछि पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयमा रहेको प्रहरी अधिकारी परिचालन गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
पोर्चुगलमा बसेर पोर्न स्टार बनाईदिन्छु भन्दै एक परिवारको उठिवास ! औषधि खुवाएर होटलमा यौन सम्पर्क गरेको भिडियो खिचेर थालियो यसरि ब्लाकमेल गर्न – भिडियोसहित
ट्राफिक जवान द्वारा युवतीको निर्मम हत्या !!
‘कमेडी च्याम्पियन’को फिनाले आज राति, तपाईको बिचारमा को बन्छ बिजेता ?
गुडीरहेको गाडी रोकेर गाडी भित्रै चालक र सहचालकले पालैपालो ….